ဖားကန့် တွင် ဥရုချောင်းရေများ ရုတ်တရက် မြင့်တက်လာ (သဘာဝ တရားကြီးက စတင်ဒဏ်ခတ်ပြီလား?) – Let Pan Daily
ဖားကန့် တွင် ဥရုချောင်းရေများ ရုတ်တရက် မြင့်တက်လာ (သဘာဝ တရားကြီးက စတင်ဒဏ်ခတ်ပြီလား?)
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်ဒေသ ဥရုချောင်း အထက်ပိုင်းမှာ မိုးရွာသွန်းမှု များတာကြောင့် ဩဂုတ်လ (၁၀) ရက် ဥရုချောင်းရေ မြင့်တက်ပြီး မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်အချို့ ရေနစ်မြုပ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဥရုချောင်းရေ မြှင့်တက်တာကြောင့် ဖားကန့်မြို့ အနိမ့်ပိုင်း နေရာတွေဖြစ်တဲ့ မော်ဝမ်းရပ်ကွက်၊ ငှက်ပျောတောရပ်ကွက်၊ မရှီကထောင် ရပ်ကွက်နဲ့ မြို့မကျောက်ဝိုင်း တို့က နေအိမ်အချို့ ရေနစ်မြုပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဥရုချောင်းက အထက်ပိုင်းက နန့်စမ်း (၂) သံဘောင်တံတားမှာ ရေတိုက်စား တာကြောင့် အလယ်ကွန်ကရစ်တိုင် (၁) ပေခန့် နိမ့်ကျမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ ပါတယ်။
လုံးခင်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ မှော်ပုံကျေးရွာ မှာလည်း လေးနှစ်အရွယ် မိန်းကလေး တစ်ဦး ဦး အိမ်ရှေ့ရေနုတ်မြောင်း အတွင်းပြုတ်ကျကာ ဆန်ခါချောင်း လက်တက် အတွင်း မျောပါခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်ထိ ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း မရှိသေးဘူးလို့လည်း သိရပါတယ်။ ဒီကနေ့ ဩဂုတ် (၁၁)ရက် မနက်ပိုင်းမှာတော့ ချောင်းရေ ကျဆင်းသွားပြီး ပုံမှန် ရေမျက်နှာပြင် အထက် နှစ်ပေခန့် မှာ ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဖားကနျ့ တှငျ ဥရုခြောငျးရမြေား ရုတျတရကျ မွငျ့တကျလာ (သဘာဝ တရားကွီးက စတငျ ဒဏျခတျပွီလား?)
ကခငျြပွညျနယျ၊ ဖားကနျ့ဒသေ ဥရုခြောငျး အထကျပိုငျးမှာ မိုးရှာသှနျးမှု မြားတာကွောငျ့ ဩဂုတျလ (၁၀) ရကျ ဥရုခြောငျးရေ မွငျ့တကျပွီး မွို့ပျေါရပျကှကျအခြို့ ရနေဈမွုပျမှု ဖွဈပှားခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
ဥရုခြောငျးရေ မွှငျ့တကျတာကွောငျ့ ဖားကနျ့မွို့ အနိမျ့ပိုငျး နရောတှဖွေဈတဲ့ မျောဝမျးရပျကှကျ၊ ငှကျပြောတောရပျကှကျ၊ မရှီကထောငျ ရပျကှကျနဲ့ မွို့မကြောကျဝိုငျး တို့က နအေိမျအခြို့ ရနေဈမွုပျခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဥရုခြောငျးက အထကျပိုငျးက နနျ့စမျး (၂) သံဘောငျတံတားမှာ ရတေိုကျစား တာကွောငျ့ အလယျကှနျကရဈတိုငျ (၁) ပခေနျ့ နိမျ့ကမြှု ဖွဈပှားခဲ့ ပါတယျ။
လုံးခငျး ကြေးရှာအုပျစု၊ မှျောပုံကြေးရှာ မှာလညျး လေးနှဈအရှယျ မိနျးကလေး တဈဦး ဦး အိမျရှရေ့နေုတျမွောငျး အတှငျးပွုတျကကြာ ဆနျခါခြောငျး လကျတကျ အတှငျး မြောပါခဲ့ပွီး လကျရှိအခြိနျထိ ရှာဖှတှေရှေိ့ခွငျး မရှိသေးဘူးလို့လညျး သိရပါတယျ။ ဒီကနေ့ ဩဂုတျ (၁၁)ရကျ မနကျပိုငျးမှာတော့ ခြောငျးရေ ကဆြငျးသှားပွီး ပုံမှနျ ရမေကျြနှာပွငျ အထကျ နှဈပခေနျ့ မှာ ရှိနတေယျလို့ သိရပါတယျ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဗျာကို လေလံအောင်သွားတဲ့သူ အကြောင်း ကိုထုတ်ပြောလာတဲ့ ကိုမောင်မောင်အေး
Quarantine ဝင်မယ့်သူ တစ်ယောက် ရဲ့ ကုန်ကျစရိတ် ဘယ်လောက်ရှိလည်းဆိုတာ?